Thiago Alcantara oo tallaabo kale u qaaday ku biirista Kooxda Liverpool… (Maxaa soo kordhay?) – Gool FM
Thiago Alcantara oo tallaabo kale u qaaday ku biirista Kooxda Liverpool… (Maxaa soo kordhay?)
(Munich) 27 Juun 2020. Laacibka khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Bayern Munich ee Thiago Alcantara ayaa maalmihii ugu dambeeyay lala xiriirinayay u dhaqaaqista kooxda heysata horyaalnimada England ee Liverpool, waxaana wararku ay sheegayeen inuu xiddigan isagu xiiseynayo la shaqeynta Macallin Jurgen Klopp.
Wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxa dalka Jarmalka ayaa sheegaya Thiago uu macsalaameeyay xiddigaha ku kooxda ah, taasoo muujineysa sida uu ugu heellan yahay ka huleelidda Allianz Arena.
Wargeyska Bild oo soo xiganaya Evening Standard ayaa daaha ka rogay in kubbad qaabeeyaha reer Spain uu u sheegay saaxiibbadiisa inuu isaga tagayo Bayern si uu ugu dhaqaaqo horyaalka Premier League.
Reds ayaa la aaminsan yahay inay hor kaceyso kooxaha lala xiriirinayo maadaama uu isaga doonayo, balse Bayern Munich ayaa 72 milyan oo gini dul dhigtay iibka laacibkooda khadka dhexe.
29-jirkan ayaa kooxda heysata horyaalka Bundesliga ku soo biiray xagaagii 2013 xilligaas oo uu iska diiday heshiis cusub oo ay Barcelona usoo bandhigtay, waxaana uu go’aansaday inuu fursad kale raadiyo sin uu waqti ciyaareed joogto ah u helo.
Ku guuleysiga horyaalka Premier League oo khasaaro u horseeday Kooxda Liverpool iyo Arsenal oo Gawska dambe ka qosleysa!